Iglasi yevase yefektri-abavelisi baseGlass yevase, abaxhasi
Imivalo emi nkqo
Yenziwe njengeglasi enganyangekiyo ngobushushu, unokuba neentyatyambo ezomileyo okanye iihydroponics ukuhombisa indawo yakho.
Iimpawu ezincinci ezithandekayo kunye nezityalo eziluhlaza ziya kongeza amandla amaninzi ekhayeni lakho okanye eofisini kwikhaya lakho okanye eofisini.
Ifanelekile itafile, ibhentshi, ikhabhathi kunye nomsebenzi wokuhombisa, ngakumbi kubomi bemihla ngemihla nasemtshatweni.
Umbono omkhulu wokuhombisa ikhaya, igadi, uMtshato okanye iiholide. Inceda ukuhombisa nokucoca indlu okanye iofisi yakho, umhombiso olungele wena
Umhombiso omnandi wevasey kunye nentyatyambo efanelekileyo, kwindawo entle, uyathandeka emehlweni.
Umbala: Luhlaza, Ngwevu, Luhlaza, Mfusa, Nomdiliya
Ukugqitywa kweentyatyambo ze-vase kuphuma kubuhle bezinto zeentyatyambo kwaye ngokuyinxenye kukhuseleko lwevasi. Esi sixhobo seentyatyambo, sibonelela ngendawo entle yokuhlala inani elikhulu leentyatyambo.
Umlomo we-vase ukhazimlisiwe, ujikeleze kwaye ubushelelezi ngaphandle kokulimaza isandla.
Umzantsi webhotile uqinisiwe kwaye ubekwe kakuhle kwaye uqinile
I-vase yeglasi yenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu, omabini amacala kunye nasezantsi uyilo olusisigxina. Umda webhodlela yomlomo ugudile, kwaye ulungiselelo lweentyatyambo aluzukukrwempa isandla sakho.
Ubume beprismatic stripe yoyilo yenza ukuba ikhetheke ngakumbi ekuhombiseni, kucace ngokujonga nje ukuba ungabona iziqu.
Ukudityaniswa kokusebenziseka kunye nobuhle, iglasi yevasi entle yokuhombisa ukulungelelaniswa kweentyatyambo okanye ukulima izithole; Uyilo olulula kodwa luhonjiswe ngokulula ngesitayile esahlukileyo.
Iglasi yeentyatyambo yeglasi ilungele ikhaya lakho, iofisi, ikhefi, igumbi lokulala njalo njalo. Ukudityaniswa kweentyatyambo ezintle kunye nevazi kunokuba yindawo entle kwindawo yakho.